नरभक्षी चितुवाले रित्याएका २४ काख ! ज्यान जोगाइदिन स्थानीयको माग – इन्सेक
नरभक्षी चितुवाले रित्याएका २४ काख ! ज्यान जोगाइदिन स्थानीयको माग
बैतडी ०७६ असोज १ गते
तल्लोस्वराड क्षेत्रमा आँगनमा खेलिरहेका र राति आमासँगै सुतिरहेका बालबालिकालाई चितुवाले आहार बनाउन थालेको वर्षौँ भयो । तर, अझै सरकारी निकायबाट यसको नियन्त्रणका लागि ठोस पहलथालेको छैन ।
आमाको काख रित्याउने गरी घरमै पसेर वर्सेनी चितुवाले बालबालिका खान थालेपछि स्वाराड क्षेत्रका स्थानीयहरूले चितुवा नियन्त्रणमा लिइ जीवन रक्षाको माग गरेका छन् ।
गत भदौ २१ गते चितुवाले शिवनाथ गाउँपालिका-२ का सात वर्षीय सुदीप मडैलाई खाएपछि राहत वितरणका लागि घटनास्थलमा गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेल नेतृत्वको टोलीसँग स्थानीयले यस्तो माग गरेका हुन् ।
चितुवाले आतङ्क मच्चाएको वर्षौँ बितिसक्दा समेत सरकारी पक्षले राहत बाहेक यसको समाधानका लागि कुनै प्रयास नगर्दा आफूहरूको बाँच्न पाउने अधिकार समेत हनन् भएको स्थानीय रामसिंह मडैले गुनासो गरे ।
जिल्लाको दक्षिण भेगमा पर्ने मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा नरभक्षी चितुवाले घरभित्र पसेर मान्छेको शिकार गर्न थालेको सात वर्षभयो । यो अवधिमा २४ बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुका साथै १२ जना घाइते भएका छन् ।
शिवनाथ गाउँपालिका-२ मा भदौ २१ गते आँगनमा खेलिरहेका सात वर्षीय सुदिप मडैलाई चितुवाले झम्टेर जङ्गलमा लगेर खाइदियो ।
सुदिपलाई आमाले भर्खरै डोर्‍याएर गाउँ नजिकैको स्कुल लैजानु हुन्थ्यो । चितुवाले बच्चालाई चुँडेर काख रित्तो पारेपछि बालककी आमा कलावती मडै अहिलेसम्मै सुताएकी छन् । उनले चितुवालाई नियन्त्रणमा लिइदिन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् ।
चितुवाले आधा शरीर खाएको अवस्थामा जङ्गलमा फेला परेको सुदिपको शव प्रहरी मुचुल्कापछि पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला लगियो ।
गाउँकै केशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर विदामा बसेकाले पोष्टमार्टम हुन सकेन । शव प्लाष्टिकमा पोको पारेर बालकका बुवा रामसिंह मडै ट्याक्टरको पछाडि बसेर ६५ किलोमिटर कच्ची सडक पार गर्दै जिल्लाको पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुगे ।
डाक्टर आएपछि तेश्रो दिन बालकको शवको पोष्टमार्टम भयो । पोष्टमार्टमपछि बुबा रामसिंह मडैले पाटनको सुर्नया नदी किनारमा छोराको अन्त्येष्टी सकाएर घर फर्किए ।
घटनापछि शिबनाथ गाउँपालिका-२, टाँडखर्क गाउँ नै त्रसित बनेको छ । बालबालिका स्कुल जान सकेका छैनन् । गाउँमा खेती किसानी गरेर बसेको मडै परिवार शोकमा डुबेको छ । घटनापछि राति जङ्गलमा चितुवा गर्जिने गरेको स्थानीय शुक्रसिंह मडैले बताए ।
गाउँमा पसेर मानव शिकार गर्दै आइरहेको चितुवालाई अहिलेसम्म नियन्त्रणमा लिइएको छैन भने राज्यले पनि बेवास्ता गरिरहेको स्थानीय राजेन्द्र साउदको आरोप छ ।
सात वर्षको अवधिमा चितुवाको आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाउने बालबालिकामा विशापुरका वीरबहादुर चन्द (डेढ वर्ष), उदयदेवका सुनिल साउद (अढाई वर्ष), पञ्चेश्वरकी सुनिता साउद (१० वर्ष), किथ्थी देवी साउद (२७ वर्ष) र आशाकुमारी कोली (१३ वर्ष) रहेका छन् ।
त्यसैगरी, कुलाउकी ११ वर्षीया निर्मला कुमारी, विशालपुरका चार वर्षीय दिपक चन्द, ६ वर्षीय नवीन भट्ट, १० वर्षीय सुरज लोहार, ११ वर्षीया चम्फाकुमारी भट्ट रहेका छन् । आमचोराकी चार वर्षीया सुप्रिया चन्द र आठ वर्षीया मञ्जु चन्दलाई पनि चितुवाले खायो ।
यस्तै गिरेगाडाका सात वर्षीय सन्तोष चन्द, शर्मालीकी पार्वती चन्द, आमचोराका चार वर्षीय महेश चन्द, विशालपुरकी डेढ वर्षीया कोपिला चन्द, तीन वर्षीया प्रतिष्ठाकुमारी बिष्ट, १६ वर्षीया सपना लुहार, आठ वर्षीय डम्बर सोनी पनि विशालपुरकै हुन् ।
उदयदेवकी ६ वर्षीया ललिता साउद, महाकालीका सचिन साउद, उदयदेवकी सात वर्षीया चन्चला साउद, १२ वर्षीया उजली साउद र शिवनाथका सात वर्षीया एक बालिकासहितका बालवालिकालाई चितुवाले आहारा बनाइसकेको छ ।
चितुवाले काख रित्तो बनाएपछि पञ्चेश्वर गाउँपालिका-४, आमचोराकी निर्मला चन्द घर छोडेर अर्को बिनायक गाउँमा सहारा लिएर बसिरहेकी छन् ।
उनका पाँच वर्षीय छोरा महेश चन्दलाई घरमै आएर चितुवाले दिउँसै खाएपछि घर छाडेर छिमेकी गाउँमा आश्रय लिएर बसेकी हुन् ।
पीडित चन्दले भनिन्-'घटनापछि त्यो घरमा जानै मन लाग्दैन । छोराकै अनुहार आँखा वरिपरी घुम्छ । राजगारीका लागि उहाँ (श्रीमान्) परदेश जानु भएको छ ।'
राज्यले चितुवा नियन्त्रण नगरिदिँदा चितुवा पीडित आमाहरू भाग्य र दैवको खेल सम्झेर देवीदेवताको पूजापाठमा लागेको स्थानीय वीरेन्द्र चन्दले बताए ।
चितुवा नियन्त्रण गर्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण साउदले बताए । साउदले भने-'तल्लोस्वराड क्षेत्रमा चितुवाले यति ठूलो क्षति पुर्‍याउँदा पनि राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । गाउँमा चितुवाको त्रासले बालबालिका स्कुल जान डराएका छन् । वर्सेनी चितुवाको आक्रमणमा परेर स्वराडबासीले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।'
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख केशव पराजुलीका अनुसार चितुवा नियन्त्रण गर्न वनका कर्मचारी र सुरक्षा निकायको टोली चितुवा प्रभावित क्षेत्रमा जाने तयारी भइरहेको छ ।
सुरक्षाकर्मी परिचालन भए पनि चितुवासम्बन्धी विज्ञ टोली नआएसम्म चितुवा नियन्त्रण नहुने डिभिजन प्रमुख पराजुलीको भनाई छ ।
उनले भने-'चितुवा प्रभावित जिल्लाहरूमा बैतडी देशभरमा नै अग्रस्थानमा छ । सुरक्षाकर्मी मात्र परिचालन गरेर केही हुँदैन भन्ने कुरा त यसअघि पनि देखिसकियो नि ! चितुवा नियन्त्रण नै गर्ने हो भने चितुवा यसरी किन नरभक्षी बन्यो ? चितुवाको आहारा र बासस्थानका बारेमा विज्ञ टोलीले अनुसन्धान गरेपछि मात्र नियन्त्रण हुनसक्छ ।'
जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले चितुवा प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय भएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चितुवा नियन्त्रण गर्ने विज्ञ टोली नभएकाले समस्या भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टको भनाई छ ।
विगत वर्षहरूदेखि नै बैतडीको तल्लो स्वराड क्षेत्रमा चितुवाले मच्चाएको आतङ्क र यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीयहरूबाट पनि पटकपटक माग आएको उनले बताइन् ।
उनले भनिन्-'सुदूरपश्चिममा यससम्बन्धी विज्ञ टोली छैनन् । यहाँको शसस्त्र प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायलाई तालिम दिएर टोली तयार गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदस्तरीय निर्णयका लागि म पहल गर्ने छु ।'
स्वराडको समस्या समाधानका लागि अब प्रदेश र केन्द्रस्तरमा समेत छलफल गरिने मन्त्री भट्टको भनाई छ ।